२०७७ फागुन ८ गते, शनिवार, २० फेब्रुअरी २०२१। माघ शुक्लपक्ष, अष्टमी तिथि
मेष – ARIES – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने चिताएको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन्। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ।
वृष – TAURUS – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
कामना पूर्ण हुनेछ भने रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्न सक्छ। आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। काममा विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले पनि हौसला जगाउनेछ। लक्ष्यअनुसार सजिलै उद्देश्य प्राप्त हुनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विशेष उपहार पनि प्राप्त हुनेछ।
मिथुन – GEMINI – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह
छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपरे पनि कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। केही खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आफ्नो मिहिनेतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्।
कर्कट – CANCER – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
पहिलेको आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह जाग्नेछ। आवश्यक भाैतिक साधन जुट्नाले नयाँ काम थालनी हुनेछ। नयाँ अवसरका साथै आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। व्यापारमा लाभ उठाउन सकिनेछ। स्रोत–साधन जुटाउन केही बढी रकम खर्चनुपर्ने हुन सक्छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ।
सिंह – LEO – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउनेछ। प्रयत्न गर्दा सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् भने कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ। नोकरी तथा व्यवसायमा फाइदा हुनेछ। भौतिक साधनहरू संग्रह हुनेछन्। तारिफयोग्य कामले धेरैको मन जित्न सकिनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउन पनि सकिनेछ।
कन्या – VIRGO – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि तत्काल लाभ नहुन सक्छ। अवसरका लागि जोखिमपूर्ण काममा जुट्नुपर्ला। कामको सन्दर्भमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ला। केही चुनौती देखिए पनि भाग्यले अवसर थमाउनेछ। रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। धर्मकर्म तथा परोपकारी काममा प्रवृत्त भइनेछ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ।
तुला – LIBRA – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते
सामान्य काममा धन र श्रम खर्चनुपर्ला। समस्याप्रति गम्भीर नबन्दा दु:ख पाइनेछ। कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी तथा आलस्य अनुभूति हुनेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। बिग्रिएको काम सच्याउन दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ला। मिहिनेतले मात्र काम बन्नेछ। हुलमुलमा धनमाल जोगाउन सजग रहनुहोला।
वृश्चिक – SCORPIO – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु
प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। सोखले खर्च भने बढाउने देखिन्छ। औपचारिकता र उपहारमा पनि अधिक खर्च हुनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ। आँटेका काममा साथीभाइबाट सहयोग मिल्नेछ।
धनु – SAGITTARIUS – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे
मकर – CAPRICORN – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि
आफ्ना सूचना बाहिरिनाले समस्या आउला। कामप्रति गम्भीर नबन्दा पछि परिनेछ। तापनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन् भने चिताएका काम बिस्तारै भए पनि सम्पादन हुनेछन्। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। सन्तान वा सहयोगीका माध्यमबाट काम बन्ने देखिन्छ। आफ्नो प्रतिभाको कदर हुनेछ। बौद्धिक उन्नतिकाे समय छ।
कुम्भ – AQUARIUS – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द
मीन – PISCES – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि नयाँ काममा जग बसाउने मौका छ।
Previous articleकुन भागमा टाउको दुख्नु के रोगको संकेत ??
Next articleनासाले मंगल ग्रहमा पर्सिएन्स रोभर सुरक्षित रूपमा अवस्थित गरे पछिका केहि तस्बिरहरु !!
कर्णालीमा हराएकी रजनीको शव १० दिनपछि भेटियो
सेयर बजारमा प्रवेश अघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु !!
नेपालमै बन्छ थोरै लगानिमा आकर्षक घर
चिनियाँ अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री तातोपानी नाकातर्फ प्रस्थान
खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम
संसद पुन:स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला